Dhageyso: Maxaa ka soo kordhay baaritaanada Dilkii bahalnimo ee loo geystay Caaisha ILyaas? – Walaal24 Newss
wararka la xariira dhacdadii bahalnimo ee sidda foosha xun loogu kufsaday, Jirdilay, Nolosheediina lagu dhaafiyey Caaisha Ilyaas Aden oo ahayd gabar 12 sanno jir ah oo ku nooleyd magaalada Gaalkacyo.
Baaritaano socday 29 saacadood oo ka dambeysay helidii meydka Caaisha ayay soo gaba-gabeeyeen Khuburada baareysay dheecamada ama Hida-sidayaasha meydka, waxaana lagu xaqiijiyey baaritaankan in la kufsaday, la jirdilay, ugu dambeyn-na lagu dilay CEEGO.
Meydka Caaisha ayaa lagu soo aasay magaalada Gaalkacyo, Kumanaan Shacab ah ayaa ka qeybgalay Aaska, waxayna ahayd Saqiir aan wali qaan-gaarin, Ubaxii dalkan oo bahalo ay qasheen, ugu dambeyn-na waa la aasay.
Laamaha Amniga ee xagga ciidamaddu waxay sameeyeen howlgalo lagu xaqiijinayo sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dhagar-qabayaasha, waxaa la qabtay dad la tuhmayo ilaa hadda oo gaaraya 4 qof, sidda ay xaqiijiyeen masuuliyiin katirsan guddiga Amniga ee gobalka.
Kulamo kala gedisan ayaa u socda qeybaha bulshada, waxaana aad looga walaacsan yahay waxa ka dambeyn doona ficiladan foosha-xun iyo sidii go’aan mideysan oo ah in cadaaladda la wajaho loo qaadan lahaa.
Xildhibaanada baarlamaanka Puntland waxay amreen in aan gabi ahaanba Odayaal dhaqan iyo cid kale toona lala aadin dhacdadan ee lagu kobo gacanta dawladda iyo Sharciyada dalka u yaala oo la mariyo dhagar-qabayaasha.
Maxkamadda Darajada 1aad ee Gaalkacyo waxay amartay soo qabashada gaari sumadiisu tahay MARK II GG-682, uuna ku qoran yahay Ilyaas Aaden Cali, gacantana ilaa hadda laguma hayo.
Warar hoose ayaa sheegaya in ay Madaxtooyada Puntland wafdi wasiiro ah u diratay gobalka Mudug, kuwaas oo kiiska Caaisha maareyn doona, laguna amray in gacata dawladda la gasho oo Cadaaladda la waafajiyo.
Dad kala duwan ayaa bilaabay Tabarucaad lacageed oo ay u aruurinayaan Qoyskii Soomaaliyeed ee dhibaatadu ku dhacday, waxaana muuqata in ay dadka Soomaalidu si wanagsan uga falceliyeen.
Howlgalo khaas ah ayaa mar kale magaalada laga dareemayaa maanta, xili aysan Waxbarasho maanta jirin oo ay Shacabku u ahayd maalin-madow.
Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee dhinaca Puntland Cabdulqaadir Xuseen Nuur Dirir oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in falkii kufsiga iyo dilka isugu jiray ee habeen kahor loo gesytay Caaisha Ilyaas oo 12 jir aheyd loo soo qabtay afar qof oo lagu tuhunsan yahay inay ka danbeeyeen falkaasi, isla markaana cadaalada la horkeeni doono.
Sidoo kale waxa uu sheegay Guddoomiye Cabdulqaadir in hadii kiiskaas uu ku cadaado afarta ruux ee lagu tuhmaayo in ay ka dambeeyaan Goob fagaaro ah lagu toogan doono,waa sida uu hadalka u dhigay.
Iskuuladii ku yaallay Magaalada Gaalkacyo ayaa Maanta waxaa loo fasaxay dhibaatadii ku dhacday gabadhaasi awgeed,iyadoo halkaasi Maanta uu ka dhacay kulan looga hadlayay dhibaatada kufsiga.
Halkan hoose ka dhageyso Gudoomiyaha Cabdulqaadir Xusen Nuur Dirir:-
Howlgal ay ka wadanaan Ciidamada Xooga Dalka inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Beydhabo